हिमालका सारथी चतुर ... - Tourisms Online News
२०७५, २५ चैत्र सोमबार ०९:१०
सोलुखुम्बु काँकुका चतुर तामाङले पाचौं पटक सगरमाथाको आरोहण गर्ने भएका छन् । च टुर्स ट्रेक्स एण्ड एक्सपीडिसन टोली मार्फत २०१९ का लागी सगरमाथा आरोहण गर्ने भएका हुन । आरोहणका लागि अप्रिल ८ तारिख लुक्ला हुदै आधारशिविर जाने उहाँले बताउनुभयो । सन २०१२ मा सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएका तामाङले सन २०१६ देखि लगातार सगरमाथाको आरोहण गर्दै आउनुभएको छ ।
१९९८ देखि आरोहण शुरु गर्नुभएका तामाङले नेपालका प्राय सबै र विदेशका चर्चित हिमालहरुको आरोहण गरिसक्नुभएको छ । त्यसयता कञ्चनजंगा, आमाडव्लम, ल्होत्से, चोयु, मनास्लु, बरुञ्चे लगायतका हिमालहरुको सफल आरोहण गरेको तामाङले बताउनुभयो । हिमाल र हिउँमा रमाउने तिव्र ईच्छाका साथ आफुले हिमाललाई व्यबसायिक रुपमा रोजेको उहाँको भनाई छ । तामाङले अन्नपुर्ण, मेरापिक, आईसल्याण्डपिक जस्ता साना ठुला हिमालहरुको आरोहण गरिसकेको आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत सार्वजानिक गर्नुभएको छ ।
आरोहणको अभ्यासका लागी मेरापिक, आईसल्याण्डपिक आरोहण गराउने गरिन्छ । तर तामाङले मेरापिक १६ पटक र आईसल्याण्डपिक १२ पटक आरोहण गरेको जनाएको छ । हिमाल आरोहणको याम बाहेक पनि भिन्न समय र भिन्न रुपबाट हिमाल आरोहण गर्ने लक्ष्य रहेको तामाङले बताउनुभयो ।
जीवनको आधा समय हिमालमा नै वितेको स्मरण गर्दै बाकी समय पनि हिमाल आरोहणमा नै विताउने बताउनुभयो । तामाङले नेपालको मात्र नभएर विश्वका Mt.Kilimanjaro, Mt. Elbrus 5642m. को समेत सफल आरोहण गर्नुभएको छ । ५७ पटक Mt. Elbrus 5642m. को आरोहण गरेको अभिलेख रहेको तामाङले बताउनुभयो । आरोहणको याम बाहेक फरक समयमा समेत Mt. Elbrus को आरोहण गरेको बहाको भनाई छ ।
हिमालसग गहिरो नाता जोडेका तामाङले एकै सिजनमा सगरमाथामा र ल्होत्से हिमाल आरोहण गरी किर्तिमानी समेत बनाएका छन् । आरोहण ईतिहासमा तामाङ समुदायकै उज्वल नक्षेत्रका रुपमा रहेका तामाङले आफुलाई आरोहीका रुपमा परिचय दिन पाउदा गर्व लाग्ने गरेको बताउदै बहाले सरकारी तवरबाट भने आरोहीहरुलाई खासै महत्व नदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।